Ubuntu 12.04 (တိကျသော Pangolin) သည် CD တစ်ခုနှင့်မကိုက်ညီပါ Linux မှ
Ubuntu 12.04 (တိကျသော Pangolin) သည်စီဒီတစ်ခုနှင့်မသင့်တော်ပါ
En ဘုရားရေ! Ubuntu သူတို့ကဒီအကြောင်းကိုငါတို့ပြောသကဲ့သို့ငါတို့ဖတ်နိုင်သည် Launchpad.
ပြနာကဒါပဲ Ubuntu ကို 12.04 ယူလိမ့်မယ် 750MB, 50MB လောက် CD တစ်ခုကအများဆုံးထောက်ပံ့တာထက်ပိုများတယ်၊ ငါအကြောင်းပြချက်တစ်ခုကငါအနည်းဆုံးခဏလောက်စဉ်းစားထားတာထက်ပိုပါတယ် Gtk3 y Gnome3.
ဤ 50MB များသည်အခြား Canonical application များကို ISO ထဲ၌ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်နှင့်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတွေ့အကြုံတို့ကိုတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ Gnome3 စိုးရိမ်သည် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး Shell for Gtk3 လိုမျိုး code နဲ့ပိုပြီး extensions တွေကိုဘာသာပြန်တဲ့ :)
ကောင်းပြီ ... သူတို့က LiveUSB လုပ်ပြီး pendrive ကိုသုံးပြီး ISO ကို install လုပ်နိုင်တယ် 750MB ဖြစ်ရုံသာမက 1.5GB ISO ဖြစ်ရန်လည်းလိုသည်) နှင့်ဒီဗီဒီထဲသို့ကူးနှင့်ဒါပါပဲ။
တစ်ခုခုကိုလမ်းငါထင်ပါတယ် Ubuntu ကို ၎င်းသည် CD ထဲ၌အမှန်တကယ်မပါ ၀ င်နိုင်တော့ပါ၊ ၎င်းသည်ဆုံးရှုံးမှုများစွာဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် ပို၍ များသောကြောင့်၎င်းသည်နောက်သို့ပြန်သွားနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Ubuntu 12.04 (တိကျသော Pangolin) သည်စီဒီတစ်ခုနှင့်မသင့်တော်ပါ
အဆိုပါ algorithm ကို ဖြေရှင်းချက် xD ဖြစ်ပါတယ်
ကောင်းပြီကျွန်ုပ် tag ကိုမပိတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် # $% & # $% & jaojoaojajoa နှင့်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်
အဲ့ဒီအရာတွေနှင့်အတူ ubuntu သည်သုံးစွဲသူများကိုသာဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
vlw fwi, ကေတီဟုမ်း
<b Ubuntu, ငါမှတ်ချက်ကိုအလယ်မှာထားခဲ့။
ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီ distro ကိုမသုံးဖို့အကြောင်းပြချက်တွေပိုများများတွေ့နိုင်တယ်
အိုးလာငါ့ဘောလုံးတွေမထိကြဘူး !!!! ငါသာအလောင်းအစားလုပ်ခဲ့လျှင်သင်ဤရာထူးကိုသင်တန်ဖိုးထားသည်ဟုအလောင်းအစားပြုမည်ဆိုပါကသင်ကဟဟဟဟဟ်ကိုခြေရာခံရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ထပ်တလဲလဲထပ်တူထပ်တူပဲ၊ ဒီဆိုဒ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အနှောင့်အယှက်မှမခွဲခြားနိုင်ကြောင်းသတိပေးသည်။ Ubuntu သည်၎င်း၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုခွဲခြားထားသည်။ Ubuntu နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းများကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
<° Ubuntu p pseudo ဘလော့ဂ်များစွာတွင်ဆိုးရွားသည့်အရူးဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး Ubuntu ပြက္ခဒိန်ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သောဗုံးများသည်ဥ၊ ဥတို့ထိလျှင် kubuntu, xubuntu, edubuntu နှင့်အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များအတွက်သီးခြားစီပြုလုပ်သည်။ လာမယ့် buntu ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်သူတို့က Ubuntu အသစ်ကိုယူလာမည့်အရာနှင့်ထွက်လာသည်။ kubuntu, xubuntu နှင့်အခြားမူကွဲများအတွက်သီးခြားကိစ္စတစ်ခုထွက်လာလိမ့်မည်။ ထို့နောက်နေ့ရက်များကျန်ရှိတော့သည့်အခါသူတို့သည်အဓိပ္ပာယ်မဲ့သောအရာများဖြင့်လာသည်။ Ubuntu ရောက်ရှိရန် ၃ ရက်ကျန်တော့သည်။ XX.XX သည်မျောက်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း "နှင့်အတော်များများအတွက်လည်းအတူတူပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် kubuntu, xubuntu စသဖြင့်
နောက်ဆုံးတွင်ဖြန့်ချိလိုက်သောအခါ distro, Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, mecawenbuntu စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သူတို့ဟာမေ့မထားနိုင်အောင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ပြောခဲ့တဲ့“ သတင်း” ကိုရှင်းပြဖို့နောက်ထပ်ရက်သတ္တပတ်များစွာကုန်လွန်ကြပြီ။ ကောင်းမြတ်ခြင်းအတွက် Ubuntu နှင့် ပတ်သတ်၍ ဖွင့်လှစ်သောပြissuesနာများသည်မခံမရပ်နိုင်၊
အသုံးပြုရန်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့် miniCD တစ်ခုပြုလုပ်ရန် (အသုံးပြုသူမှမည်သည့်အရာမှပြုပြင်ရန်မလို) ။ နှင့်တပ်ဆင်ပြီးနောက်, ပထမ ဦး ဆုံး Boot တက်နှင့်အတူ ... ။ အသုံးပြုသူအမှတ်အသားပြုရန်နှင့်လက်ခံရန်လိုအပ်သည့်အခြေခံ (ရုံးစသဖြင့်) ကိုတပ်ဆင်ရန် (ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်) ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏ကောင်းမွန်သောတင်ဆက်မှုတစ်ခုကို script တစ်ခုစတင်သည်။
ဒါဟာမလေးနက်ပါဘူး။ Jose ကပြောကြားသည်မှာ OS ပြီးပါကနောက် script တစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်သော installation CD ကိုပြုလုပ်ရန်ဘာမျှမလိုပါ။ distros တော်တော်များများသည်သူတို့၏ဗားရှင်းအသစ်များကိုစတင်သောအခါ Live OS ကိုရိုးရှင်းသော OS က posteriori (လမ်းညွှန်ထားသောနည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်စေ) ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်ကုဒ်များ၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၊ ဘာသာစကားများ၊ စားပွဲခုံများဖြင့်ကောင်းစွာတင်ထားသောဒီဗီဒီကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားတယ်၊
ဗားရှင်း ၁၁.၁၀ နှင့်၎င်း၏ကျော်ကြားသော Unity သည်ပရိဘောဂများကိုမသိမ်းဆည်းနိုင်ပါက (၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်ပုံရသည်) ၁၂.၀၄ သည်အသုံးပြုသူများကိုပြောင်းရွှေ့ရန်ပိုမိုစေနိုင်သည်။
ဆိုက်ကို (တရားဝင်) ကြိုဆိုပါတယ်😀
Post installation wizard သည်မကောင်းသောအကြံမဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ယင်းကိုမပြီးဆုံးသေးပါသနည်း ၀_oU
ဘာမှမ, site ကိုမှကြိုဆို the
Hehe ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သငျသညျမွငျသကဲ့သို့ငါ user agent ကိုပြင်ပေးနိုင်ခဲ့သည် elav tutorial များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်မဲကိုအပြည့်အဝမဖြေရှင်းနိုင်ပါ (LMDB ကိုအသုံးပြုသောအခါမကျော်လွှားနိုင်သောကွဲပြားခြားနားမှုများရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်) သို့သော်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်အား၎င်းကိုမည်သို့ရှင်းလင်းရမည်ကိုအလွန်ရှင်းလင်းသောစိတ်ကူးဖြင့်ပေးခဲ့သည်၊
ကောင်းပြီ, ဘာမျှမ, လေ့လာသင်ယူနှင့်မှတ်ချက်ပေးရန်။ နှုတ်ဆက်ခြင်း!
ငါ LMDE အသုံးပြုတဲ့ Debian ဆီကသင်ခန်းစာတွေလုပ်တယ်။ သူတို့ကငါ့အတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဟေး၊ မင်းမင်းရဲ့နည်းစနစ်တွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတာဝမ်းသာတယ်😀
မြည်းအတွက် "B" ကဖြစ်လိမ့်မည်။ သူက LMDE ကိုဆိုလိုတာကခေါင်းကတစ်စုံတစ်ခုကိုထင်ပြီးလက်ချောင်းကနောက်တစ်ခုကိုဖိစေသည်။
700, 750, 850 MB, 1,5 GB၊ အမှန်တရား ...
Ubuntu မှ Unity ကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ပါကဘာမှအရေးမကြီးတော့ပါဘူး။
တကယ်တော့သူက Unity ကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ရုန်းကန်နေရဆဲ…သူမလုံခြုံသေးဘူး🙂
အမှန်တရားကတော့သူကစီးပွားဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုပံ့ပိုးပေးတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့က ၁ giga ဗားရှင်းမှာစီးပွားဖြစ်ကုဒ်များပါတဲ့ linuxmint လိုလုပ်သင့်တယ်။
12.04 ဗားရှင်းဟာတည်ငြိမ်ပြီးမျှော်လင့်ပါတယ် ၁၈၀ ဒီဂရီလှည့်ပြီးအသွင်အပြင်၊
ပုံမှန်အားဖြင့် Gnome3ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်မှုများဖြင့်ထည့်သွင်းရုံမျှဖြင့်အချို့ Ubuntu အသုံးပြုသူများသည်ကျေနပ်ရောင့်ရဲလိမ့်မည်။ ရင့်ကျက်မှု (ပို။ ပင်) ရင့်ကျက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုမှုများစွာရှိသော်လည်း၎င်းသည်အနာဂတ်အတွက်ကျွန်ုပ်မမြင်ပါ။
အဘယ်အရာမျှမရိုးသားစွာ Mint သည်လူကြိုက်များလာသည်။ မေးခွန်းမှာပေါ်လာလိမ့်မည်။ Ubuntu သည်ယခုအချိန်အထိကဲ့သို့တက်ကြွသောစီမံကိန်းတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တန့်ပါက Linux Mint မည်သို့ဖြစ်လာမည်နည်း။ 😀
ထို Mint သည် Debian အချိန်ကာလအပေါ်အခြေခံသည်
ငါ DVD ဗားရှင်းဖြစ်ချင်တယ် ... ကောင်းပြီ, ငါတို့ရုံဖြစ်ပျက်ကြည့်ဖို့စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။ 🙂
ArchLinux တွင် Xfce ကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
Kopete များအတွက် Ambiance Theme (GREAT !!!)